Dhisida Doomaha - Gargaarka Musiibada ee Mataanaha
Dhamaadkii sanadkii hore, waxaan duubnay socdaalkii aqoon isweydaarsiga ee labaad. In ka badan saddex bilood, waxaan ka shaqeynay dariiqayaga Albuquerque ilaa San Diego, ka dibna woqooyi dhanka Seattle, iyo bartamaha-galbeedka illaa Wisconsin, annaga oo ka dhigey wadar guud 21 joogsi. Markii aan u safarnay galbeedka, waxaan rabnay inaan fahanno musiibooyinka qaaska ah ee ay bulshooyinka soo food saartay, casharadii ay horey u soo barteen, iyo sahaminta sida shabakad-wadaag ay u qaadi karto agab, macluumaad, iyo sheekooyin guud ahaan waxa loogu yeero Mareykanka. Riix halkan si aad u aqriso milicsikeena safarka dayrta.
Xubnaha bulshada ee aan booqannay Chico intii lagu jiray socdaalka wax yar ka dib markii ay ka jawaabeen dabkii ku hoos jiray magaca 'North Valley Mutual Aid'. Si aad ula socoto waxa ay sameynayaan, iska hubi Facebook page. Dhanka kale, Maska Oakland, 805 Undocufund, iyo kuwa kaleba waxay sii kordhinayaan dhaqdhaqaaqa loogu talagalay ka-hortagga musiibada ka dhaxaysa is-maamul, midnimo.
Ma xiisaynaysaa waxa ku saabsan aqoon-isweydaarsiga, laakiin maysan ka dhigi karin mid ka mid ah joogsadeheenna, ama waxaad dooneysaa inaad aqoon isweydaarsi ku qabato bulshadaada? Akhriso anaga Buugga Fududaynta.
Bishii Disembar, waxaan khibrad ka helnay warshadaha samafalka ee dhow iyo shaqsiyanba magaalada Panama kadib Hurricane Michael, markii dadka degan teendhooyinka magaalada laga saaray kadib markii hay'ad samafal ay la wareegeen badbaadayaasha iyo shaqaalaha la abuuray. Si aad wax badan uga ogaato taxanaha dhacdooyinkaas, riix halkan.
Si aad u akhrido cusbooneysiinta kale ee ka dhexeeyey labadii bilood ee la soo dhaafay, riix halkan.
In la dhagaysto “Wajaho Musiibada: Dib-u-fiirinta Sannad Relief madax-bannaan”(Oo ka tarjumeysa dadaalkeena sanadkii hore, ooy kujiraan jawaabihii Hurricanes Florence, Hurricane Michael, sii wadashaqaynta dadka Puerto Rico iyo socdaalkii wadaniga ahaa) riix halkan.
Musiibada ayaa sii socota. Dhawaan waxaa jiray a bullaacadaha ku soo daadanaya Dhulka Suquamish Waqooyi-galbeed, daadadka California, Iyo tornaadooyin ku yaal Alabama. Iyo Bartamaha-galbeed iyo Waqooyi-Bari Vortex Polar, sida dababka iyo duufaanka, lahaa shaqaale xidhan oo xambaarsan cimilada ba'an. Dadbadan, xiritaanka dowladda, sameynta darbiga xadka, iyo soo masaafurinta iyo masaafurinta boqolaal kun oo muhaajiriin ah waa musiibo kasta oo wax u dhimaya sida duufaanta ama dabka.
Inbadan oo naga mid ah ayaa garanaya baahida loo qabo shaqadan si qarsoodi ah, laakiin waxaa marwalba jira caddayn taas samafalka ururada waaweyn waxay doorbidaan hodantinimada iyo mudnaanta.
Markii ay musiibooyinku sii kordhayaan heerka cusub, waxaan wajahaynaa baahida loo qabo la qabsiga iyo koritaanka. Gudaha ereyada Raul Zibechi, “Xaqiiqda cusubi waxay curyaamineysaa istiraatiijiyadeenii hore waxayna nagu qasbeysaa inaan dhisno“ arks ”(ama si kastaba ha noqotee mid kastaa wuxuu doonayaa inuu u yeero meelaha is-xakameynta iyo is-difaaca) ee aan u baahan nahay inaan ku deg degin oo aan ku dhinno duufaanta".
Ka sokow dhaawacyada la xiriira isu dhiibitaanka dhibaatada, qaarkeen ayaa naga horyimaada dhaawacyada dheer ee cadaadiska gobolka. Tabarucayaasha Mas Muertes (No More More) ayaa la siiyay ganaaxyo iyo tijaabo si ay biyo ugu daadiyaan tahriibayaasha.. Tijaabooyin dheeri ah oo loogu talagalay mutadawiciinta gargaarka bani'aadamnimada, oo ay ku jiraan dacwado dambi culus oo federaal ah, ayaa loo qorsheeyay Maajo 2019.
Laakiin qoraal wanaagsan, ururo badan iyo shaqsiyaad aad u tiro badan ayaa ku darsanaya barnaamijyada badbaadada wadaagga ah ee dadaallada abaabulkooda. Dad badan oo dalka oo dhan ah ayaa xusayay sannad-guuradii ka soo wareegtay xarigga J20 iyaga oo abuuraya ama ku ballaarinaya barnaamijyadan xaafadaha ay deggan yihiin. Xadka, xeryaha iska caabinta Waxay soo baxayaan oo isku xirayaan dhibcaha u dhexeeya xuquuqda dadka asaliga ah, iyo caddaaladda soogalootiga, waana boos weligiis sii noqon doona tan iyo markii ay saynisyahannada cimilada iyo khubarada socdaalka filayaan tirada qaxootiga cimilada inay suuragal noqon karto kici boqolaal milyan mustaqbal aan sidaa u fogeyn.
Dhacdooyinka soosocda, isku imaatinka farshaxanka masiixiga ee isku xirka gobollada dhexe ee badweynta ayaa loo qaban doonaa dhamaadka bisha maaris ee loogu talagalay dadka ku nool North / South Carolina iyo Virginia bioregion, waxaana jira foorno la mid ah shirar goboleed la mid ah Florida sidoo kale Shirka Isku-duwaha Dab-damiska ee Oregon.
Dareenka farshaxanka, ka fiirso filimka Dabka iyo Daadadka: U adkeysiga Queer ee xilligii isbedelka cimilada, Iyo Tirinta Dhacdooyinka, riwaayad cusub oo ku saabsan naxdinta iyo adkeysiga ka dhexeysa jawaabayaasha caafimaad ee degdegga ah.
Waxaan weli halis ugu jirnaa dhulka, anagoo ku jawaabeynaa sahay, gargaar caafimaad, kaabayaasha qoraxda, iyo inbadan. Laakiin illaa xad aad u ballaaran, waxaan ku jirnaa xilli is-milicsi leh, isku-dhafanno waaya-aragnimadeena iyo sidoo kale asxaab badan, waxaan isweydiineynaa nafsadeena su'aalo waaweyn sida sida aan u noqon karno wax-ku-ool iyo waara, iyo u diyaarinta masiibada mustaqbalka.
Waxaan aaminsanahay waxa aan wada dhisno. Kaliya dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq ayaa naga caawin kara inaan ka baxno daawashada masiibada cimilada ee soo socota. Laakiin waxaan helnaa qalbi qaboojin waxaan rajeyneynaa inaan aragno dhaq-dhaqaaqa dhaqdhaqaaqa oo sii kordhaya. Markaan arko geesinimada, naxariis, iyo xariirka ka badbaada musiibo badan iyo dad adiga oo kale ah oo qabanaya shaqada dhisidda adduun ka wanaagsan oo aad ku riyootid gacmahaaga qaabab aan tiro lahayn.
Adigoo halgan ah,